Amakhitshi anemiboniso: isitya sakho esibonakalayo | Bezzia
UMaria vazquez | 20/06/2022 20:00 | Ukuhombisa amaqhinga
Ngaba uza kulungisa ikhitshi lakho kungekudala? iikhikhini ezineekhabhathi ukuba sikucebisa kuya kukukhuthaza! Iikhabhathi zokubonisa zongeza ubuhle ekhitshini kwaye zilungile ekuboniseni izitya kunye nezinye iziqwenga ezintle ofuna ukuba zibonwe ngumntu wonke.
Kodwa oko akukona kuphela inzuzo yokubandakanya iikhabhinethi kwi-design yekhitshi. Ezi zenza ikhitshi libonakala likhaphukhaphu, into esinokuyisebenzisa ukwenza amakhitshi amancinci okanye amnyama abe nomtsalane ngakumbi. Ngaba uyaqala ukuthanda umbono wokubheja ekhitshini ngemiboniso?
Siye sakhankanya ukuba iikhabhinethi zongeza ubuntu ekhitshini. Ubuhle kwakhona. Kwaye ukuba, ngaphezu koko, xa sithatha indawo yezisombululo ezivaliweyo kunye ne-opaque zokugcina ngezi, sifumana indawo ebonakalayo elula. Kuyinyani ukuba ukudityaniswa kwabo kungenamveliso, kufuneka kugcinwe ngokulandelelana, kodwa kubonakala ngathi kuncinci kakhulu kodwa kuthelekiswa Zonke izibonelelo yeekhitshi ezinekhabhathi.
Ukuba sele uqinisekile ukuba wongeze omnye umboniso kwiprojekthi yakho yasekhitshini, kufuneka uthathe isigqibo sokuba ungayenza njani. Kwaye kukuba ungabandakanya imiboniso kuyilo ngeendlela ezininzi kwaye sele silindele ukuba akukho namnye ungcono kunomnye.
1 Iikhabhathi eziphezulu ezinemiboniso
2 imiboniso emi nkqo
Iikhabhathi eziphezulu ezinemiboniso
Oku mhlawumbi lolona khetho ludumileyo: buyisela iingcango zeekhabhathi eziphezulu ngeeglasi ukuze ufumane indawo kunye nokukhanya. Ngale ndlela ikhitshi iya kubonakala ilula kwaye izinto ozigcina kuzo ziya kukhuselwa eluthulini okanye kwigrisi.
Umbono olula onokudlala ngawo ukuze ufezekise izinto ezinomtsalane kunye noyilo lobuqu. Njani? Ukusebenzisa a Izinto ezahlukeneyo zemiboniso oko kubenza bahluke kwezinye iikhabhathi kwaye bakhanyise ingaphakathi labo ukutsala ingqalelo kumxholo wabo.
imiboniso emi nkqo
Mhlawumbi uyazibuza ukuba sithetha ukuthini ngemiboniso emi nkqo. Ewe, abakho abanye ngaphandle kwabo bathatha yonke into umgangatho ukuya kwimodyuli yesilingi. Ziyamangalisa kuloo ndawo apho iikhabhinethi zilandelana ukuze ziphule kunye ne-aesthetics yodonga kwaye zilula.
Ayiyiyo yonke imiboniso efunekayo ukuba ibe yimodyuli kwaye idityaniswe nefenitshala; ungayifaka ekhitshini ifanitshala ezimeleyo njengazo ziboniswe ekunene kumfanekiso ongentla. Ukuba uzibeka kufuphi netafile ekhitshini ziya kusebenza kakhulu xa ubeka itafile.
Ingakanani enkulu ngakumbi? Cinga malunga nento ofuna ukuyibonisa kwaye unciphise umboniso onokuthatha ezo zinto. Njengoko sele sitshilo ulandelelwano ngundoqo ukuze le miboniso ikhanye kwaye inkulu, iya kuba nzima ukuyigcina. Awungekhe ucinge ngesiphumo sesiphithiphithi esibangelwa ngumboniso obhidekileyo kunye nomdaka ekhitshini.
Ezinye iindlela esele zikhankanyiwe zezona zixhaphakileyo kodwa zininzi ngakumbi! Kwaye kukuba imiboniso inakho zidityaniswe kuyo nayiphi na ifanitshala. Kwaye sithetha ngefenitshala, ezinye zezinto esizithandayo zezo zidibanisa iingcango ze-opaque kwindawo ephantsi kunye neengcango zeglasi kwindawo ephezulu kwisithathu kwisithathu. Ziyifenitshala ezikhanyisa ngokukodwa kwiindawo ezinkulu apho igumbi lokutyela labelana ngegumbi kunye nekhitshi. Ngaba uyabathanda?
Olu hlobo lokubonisa akufuneki ukuba, ukongeza, ubunzulu obuninzi, okuyimfuneko yokugcina izitya ezithile. kunye nokuswela indawo yokugcina ngaphezulu ungasoloko unyusa ubunzulu, ukuba uyafuna, kwiikhabhathi ezisezantsi. Kwimifanekiso ungabona imizekelo yazo zonke iintlobo esiqinisekileyo ukuba uya kuzithanda.
Ngaba uyathanda amakhitshi anemiboniso? Khumbula ukuba ukuba ufuna ukutsala ingqalelo kwi-showcase, ukungafani kombala ngokubhekiselele kuyo yonke ifenitshala kuya kuzuza. Ukuba, ngakolunye uhlangothi, ufuna ukuba ikhabhinethi idibaniswe kuyo, into efanelekileyo kukuhlonipha ukugqitywa okufanayo kunye nemibala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Ukuhonjiswa » Ukuhombisa amaqhinga » Amakhitshi anemiboniso: isitya sakho esibonakalayo